allsanaag.com - Muuqaalka iyo Macnaha ka Danbeeya
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3204	Days	19	Hours	07	Minutes	03	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Muuqaalka iyo Macnaha ka Danbeeya
Written by Shanle	Allsanaag: Sawir walba oo la qaado, waxaa lagu macneeyaa in ay dadka wax tusiyaan oo qof walbana uu si u fasirto. Sawir waxa uu ku tusayaa barwaaqo, midna dagaal iyo dhib, ama farxad; midina wuxuuba ku tusinayaa hormar uu dalka gaaray, iyadoo sawiradaa lagu soo bandhigayo wax soo saarka dalka.
Sawirada laga soo qaado meelaha ay ka dhacaan duufaanada, dhulgariirada, iyo falkaanayaasha ayaa qofka aadanaha marka uu sawirka eego waxa uu maskaxda gashanayaa in meeshaas mahlakada ka dhacday aysan sahlaneen. Qaar dadka muslimiinta u badana waxa qalbigooda ku soo dhacaya meesha sawirka uu muujinayo ee mashaqada ka dhacday in sababteeda ay aheed fusqi meesha ka dhacay darteed in dabadeed uu illaahay masiibo u keenay. meesha qaar badan oo diimaha kale heesta marka ay sawir masiibo xanbaarsan ay eegaan waxaa u soo baxda in cimilada aduunka oo kululaaneeso darteed ay dhibkaas uu u dhacay.
Sawiro inta badan oo laga qaaday dumar fara badan oo ku nool wadamada Asia, ayaa sawirada waxay muujinayaan dhibaatooyin lagula kacay dumarka. Dumar ayaa wajiyada looga shubay Aysidh. Dumarkaas marka la isbarbardhigo sidii uu ahaa wajigooda yo sida hada uu noqday ayaa qofka eegayaa waxa uu iswediinayaa raga waxaa sameeyay dhaqankooda, diintooda, aqoontooda, iyo su’aalo kale oo badan. Qaar waxaa u soo baxda markay arkaan qof dumar ah oo lagu shubay Asid oo wajigeeda badalmay in qofka waxaas sameeyay uu ahaa qof xaasid ah, jaahil, ama diintu ku yartahay.
Hadaba, Muqdisho oo aheed mar caasimadii ummada Soomaaliyeed ayaa waxaa ku habsaday masiibo kaga timi quruumo ka dhax baxay ciida iyo dhagaxa oo meeshii quruxda badneed u badalay meel indhuhu aysan qaban karin. Bal sawiradan hoos ku jira bal fiiri oo macnaha dhabta ah ee uu kuu sameenayaan shaqsi ahaan u fasiro. Haday noqon laheed in aad ku xasuusato wadanka siduu ahaan jiray iyo markii danbe sida uu noqday, ama isweydii waxa sawirada ay kaaga dhigan yihiin adiga oo si hoose isu weydiinaya. Cidii danbigaa caasimada ka gashay oo quruxdeedii qabri u badalay ma qiran doontaa iney sidaa ka dhigeen iyaga.
AL CURUBA SIDUU AHAANJIRAY IYO SIDA LAGA DHIGAY. WAA LAGA DHEX BAXAY SIDII ABOORKII.
YAA SIDAAN WAX YEELAY? CIDII SIDAAN WAX YEESHAY MA LAGULA XISAABTAMI DOONAA?
Dawladaha Soomaaliyeed weli maaweelada carruurta ayaa u daaran oo sawiradaa dhismayaasha dunsan laga soo qaaday oo astaanta u aheyd qaranka Soomaaliyeed ayey gawaadhi qurux badan ku ag wataan oo la dhex maraan. Kama duwana madaxda iyo dawlada oo dhami qof sariir qurux badan kudaafad ama qashin qub dhex dhigtay oo seexday isagoo subax walba qurunkaa ka soo ag toosaya. Markuu soo kaco ayuu muraayad kudaafadaa dhex taal isku fiiriya isagoo koodh iyo tay xidhanaya. Xitaa inta yar ee uu qashin qubka ka banaystay dadnimadiisa kuma joogo oo danyestayaal AMISOM ah ayaa ku haya.
Madaxdaa gawaaridooda iyo suudhka ay xidhan yihiin ku mashquulsani wasaaradohoodii, xafiisyadii dawlada, guryihii dadka, iskuulaadkii, jaamacaddihii, dhakhtaradii, iyo wixii la mida ayaa iyagoo xoog lagu heysto ama dunsan oo qashin qub ah ay dugsanayaan oo aaney ka hadlin. Soomaalida qaxootiga laga dhigay ee guryahooda Xamar xoogga lagu heysto goormay noqon doonaan mid laga saaro kuwa degan oo dawlad-ku-sheegu bilaabi doontaa? Goormaa dawladu joojin doontaa dhulkii banaanaa ama jagooyinkii dadka Soomaaliyeed ee Xamar ka qaxay lahaayeen ee sida sharciga lagu siiyey ee maanta dadka Xamar joogaa ay sida sharci darrada ah isaga dhisanayaan?